Nanafatra an-dreniny momba ireo zandriny ilay ankizivavy, talohan’ny nahafatesany • L'Express de Madagascar
A la une • Onjam-piainana
Nanafatra an-dreniny momba ireo zandriny ilay ankizivavy, talohan’ny nahafatesany
FOTOANA FOHY TAORIAN’NY NITONDRANA AZY TENY AMIN’NY HOPITALY JOSEPH RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA (HJRA) NO TSY TANA NY AIN’I FANOMEZANTSOA VOLATANTELY NA I VOLA. TOVOVAVY 12 TAONA NITONDRA TAKAITRA NOHO NY DAROKA SY NY FIKASIHAN-TANANA NAHAZO AZY TENY ANDRANOMAHERY ANKORONDRANO, NY ALATSINAINY 28 NOVAMBRA LASA TEO. NANDOA RÀ TAO AN-TRANONY NY TOVOVAVY, NY ALIN’NY ALAROBIA 30 NOVAMBRA HIFOHA NY ALAKAMISY 1 DESAMBRA LASA TEO. NIALANA NENINA TENY AMIN’NY HOPITALY IHANY SAINGY TSY AVOTRA INTSONY NY AINY. ANKIZY TSO-PIAINANA, TIA NAMANA ARY MANAMPY RAY AMAN-DRENY AO AN-TOKANTRANO I FANOMEZANTSOA VOLATANTELY, FONY FAHAVELONY.
Saika niteraka savorovoro teo amin’ny samy mpiara-monina eny Andranomahery Ankorondrano ny fahafatesan’i Fanomezantsoa Volatantely. Voalaza fa ankizy mpiara-mianatra aminy sady mpiara-monina aminy ihany no nanao herisetra tamin’ity tovovavikely ity. Nahagaga ny fianakaviana ihany koa ny namerimberenan’i Volatantely ny anaran’ireo olona nidaroka sy namono azy teny am-pilalaovana. Tsy hadinon’ ity tovovavy ity nialoha ny nahafatesany ny nanafatra an-dreniny ny momba ireo zandriny mianadahy kely vao roa taona sy dimy taona. Tamin’alahelo tanteraka sy hatezerana no nahenoan’ny mpiara-monina sasany, indrindra ny ray aman-dreniny ny fahafatesan’i Vola. Ireo fianakaviana izay nikasa ny hampiakatra ny raharaha eny anivon’ny polisy sy ny Fitsarana.
Tsy nety nankany am-pianarana
Kilasy fahadimy (7ème) eny amin’ny EPP Ankorondrano i Fanomezantsoa Volatantely. Nikasa hanala ny fanadinana Cepe amin’ity taom-pianarana ity ny tovovavy, saingy tsy tanteraka izany noho ny setrasetram-piainana. «Zaza tia sy mazoto mianatra i Vola, fony fahavelony», nanomboka nilazalaza ny momba an-janany fony fahavelona, teo anilany, Rasoamanarivo Perline, vonton- dranomaso. Nahagaga ny ray aman-dreniny kosa ny nahazo an’
i Fanomezantsoa Volatantely, andro maromaro lasa izay. Nilaza tsy hankany am-pianarana intsony izy noho ny adiady sy ny lonilony ary ny disadisa eo aminy sy ny mpiara-mianatra aminy. «Tsy nazoto hianatra intsony izy, ka nijanona tato an-trano.
Naterin’ny rainy teny am-pianarana ihany, saingy telo andro teo ihany dia nijanona indray izy. Narahina ny sitrapony ary nanazava io antony io taminay ray aman-dreniny izy», hoy hatrany ity renim-pianakaviana. Zaza vavimatoa i Fanomezantsoa Volatantely ary manan-jokilahy iray sy zandry mianadahy kely. Ny ray aman-dreniny no niahy sy nitaiza azy nandritra izay 12 taona izay.
Nilalao teo an-tokotany
Tsy nianatra i Fanomezantsoa Volatantely, tamin’ io alatsinainy 28 novambra io, tao anatin’ny fotoana mbola nampalaina azy. Niara-nilalao tamin’ny ankizy teo amin’ny faritra tsy dia mifanalavitra amin’ny trano fonenany izy. Tsy nisy nanam-po ny nahazo an’ity tovovavy ity ny mponina teo amin’ny manodidina sy ireo ankizy niara-nilalao taminy. Tampoka teo, voalaza fa nisy ankizivavy kely iray sy renim-pianakaviana iray nanatona azy. «Tsy nahita mivantana ny nahazo an-janako aho, tamin’io fotoana io. Ny olona sy ny ankizy ary izy kosa no nitantara ny nahazo an’
i Vola, taorian’izay. Efa nikasi-tanana azy teny amin’ilay toerana nilalaovan’i Vola ireo olona ireo. Nandositra saika hankaty an-trano izy, saingy mbola narahin’izy ireo ka niverenany nodarohana», hoy hatrany Rasoamanarivo Perline, renin’i Vola. Mafy loatra ny nahazo an’i Vola, ka tsy naharitra intsony izy ary nitaraina tamin-dray aman-dreniny. Noentina teny amin’ny dokotera izy, nony avy eo. «Nanatona ny renin’ireo ankizy nikasi-tanana azy aho, ny talata. Toy ny tsy niraharaha izany akory izy momba ny fahavoazan’ny zanako», manohy ny fitantarana Rasoamanarivo Perline.
Natahorana ny fahasalamany
Nitaraina ho narary teny ihany i Fanomezantsoa Volatantely. Nitarainany ho naharary azy avokoa ny vatany manontolo. Tsy maintsy noentina haingana teny amin’ny hopitaly kosa, ny alakamisy teo ihany, noho ny fahitana azy nandoa rà. Tsy mbola vita akory ny fizahana tokony hatao aminy teny amin’ny hopitaly Hjra, saingy niala aina i Vola. «Mbola nandoa sy nivalan-dra izy teny amin’ny hopitaly. Nisy voadona ny taova tao anatiny saingy tsy hita izany noho ny fizahana tsy tontosa. Tonga teny amin’ny hopitaly ny renin’ireo ankizy namono azy ka nanolotra vola hikarakarana ihany. Ny alakamisy io ihany, tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro no maty ny zanako», hoy ny renin’i Vola mitantara, tamin’ny endrika maloka hatrany. Taorian’ny fikarakarana ny razana, noentina avy hatrany teny amin’ ny tranon-dray aman-dreniny eny Ankorondrano ny vatana
mangatsiakan’i Vola. Vory maro ny mpiara-monina, indrindra ny namany mpiara-milalao aminy nanome voninahitra azy farany sy manome lanja ny fara veloma natao azy ihany koa. Teny amin’ny fasan-drazany eny Ambohidrapeto no nanitrihana ny razana.
Nametraka ireo zandriny tamin-dreniny
Toy ny nanao farateny i Fanomezantsoa Volatantely, nialoha ny nialan’ny fofon’ainy. Tsy niala tao am-bavany ny anaran’ireo ankizy nahavita nidaroka sy namono azy teny am-pilalaovana. Tsy nahafoy ireo zandrikeliny mianadahy i Vola, saingy tsy afa-nanohitra an-drafahafatesana. «Mbola niresaka tsara sy mazava teny tsara i Vola hatreny amin’ny hopitaly. Nanafatra mafy ahy ny momba ireo zandriny izy. Hoy izy tamiko sady miramiran’endrika no hita fa efa valaka ihany koa «tezao tsara ireo zandriko ireo ry Neny a!» » , mitantara ny niresahany tamin-janany farany Rasoamanarivo Perline.
Manoloana io tranga io, nahazoana fanazavana ihany koa ny renin’ireo ankizy voatonontonona tamin’ity herisetra nihatra tamin’i Fanomezantsoa Volatantely ity. «Mpinamana sy mifankahazo tsara izahay sy ireo fianakaviana ireo. Tsy nahita ny zavatra nihatra tamin’io ankizy io aho, tamin’ny alatsinainy. Ny zanako avy eo no nitantara fa
adiadin’ankizy ilay izy. Efa nisy nandrahona kosa ny zanako noho io
fahafatesan’ankizy io. Tonga teny amin’ny hopitaly nijery an’i Vola aho, ka nitondra vola tamin’izany, ary efa nijery ny razana teo an-tranony ihany koa», hoy i Lalaotiana.
Na mbola tao anatin’ny fahoriana tanteraka aza ny fianakaviana, tsy afaka ao am-pon’izy ireo ny nahazo an-janany.
«Malahelo aho noho ny fahalasan’ny zanako, tampoka. Hitory izahay ary tsy hanaiky mora izao nahazo an’i Vola izao. Efa eo am-pikarakarana izany eny amin’ny polisy izahay», hoy ny teny farany nataon-dRasoamanarivo Perline.
«Tsy misy namana hiarahana milalao intsony izahay. Malahelo be an’i Vola aho tamin’ny nahafatesany», hoy kosa i Faniry, anisan’ireo ankizy mpiara-monina sy mpiara-milalao amin’i Vola eo an-tanàna.
Tsy hita popoka i Augustin Andriamananoro